WAA MAXAY XIISO U LEEDAHAY IN UU WAX KA BARTO JILITAANKA SHORTHORN? - XOOLAHA
Dhulkeena waxaa ku yaal caws iyo qurxiyo qurxoon, jawigeena waa mid khafiif ah, wax walbana waxa loola jeedaa inaysan jirin wax ka horjeeda lo'da lo'da sii kordhaya.
Ganacsatadaani wax faa'iido ah uma leh mulkiilayaashooda.
Si ay u koraan lo'da hilibku uma baahna kharashyo badan.
Waxaa jira noocyo badan oo lo 'lo', laakiin in this article waxaan ka sheegi doonaa oo ku saabsan shiidaalka Shorthorn ee lo'da.
Waxaad baran doontaa sifooyinka kala duwan ee taranka, iyo sidoo kale tayada sifooyinka uu leeyahay.
Sharaxaadda Cawska Shorthorn
Cunto Tani waxay ka mid tahay ilaha ugu da'da weyn ee dhulkeenna. Lo'da beerka waa England. Asalkiisu wuxuu ka yimid xayawaanka Tivat, kuwaas oo ku soo dhowaaday Wabiga Tisza ee ku yaalla York iyo gobolka Durga, oo loo yaqaan 'Durgam' xoolo kale duwan.
Caanahan tani waxaa lagu isticmaalay laba jihooyin, sida caanaha iyo hilibka. Wax yar ka dib, lo'da Dutch ayaa bilaabay in la keeno dhulalkan.
Magaca "shorthorns" ayaa helay sababo la xiriira geesaha yaryar. Shaqooyinka PN Kuleshov, mid ka mid ah ayaa akhrin kara waxa lo'da ee Dutch ee England loogu yeeray gaaban ama lugta gaaban.
Xayawaanka shorthorn waxaa loo abuuray natiijada wax soo saarka noocyada quruxda badan, iyo gaar ahaan qashinka wax soo saarka sida Gubbak, Favorite, Comet iyo kuwo kale oo badan.
Si loo ilaaliyo dhammaan sifooyinka wax soo saarka ah ee lo'da ee lo'da this ee lo'da, waxay u isticmaaleen inbreeding ku dhow mid ka mid ah xayawaanka ugu wanaagsan oo helay natiijooyin wanaagsan. Laga soo bilaabo erayada saynisyahanada Maraykanku waxay maqli karaan in jilitaanka gaaban ee aadka u xoogan ay si aad ah ugu quudinayeen dhulkeeda iyo Mareykanka. Si loo soo saaro wax soo saarka hilibka sare, waxaa la soo saaray koronto. Sidoo kale waa la og yahay xaqiiqda ah in lo'da ee this caanaha, mararka qaarkood nuugaan jilicsan adayga, iyo gaar ahaan gobollada yar, ayaa loo isticmaalaa ka yar laba lo'da.
Waxyaabaha kala duwan ee kala duwan Geedka Shorthorn:
Tan iyo tan caan ka mid ah nooca hilibka, waxaa si dabiici ah u kala soocay qaab dhismeedka jirka, waxay yihiin kuwo si fiican u dhisay hilibka soo saaraya hilibka. Dhererka jirka oo idil ilaa 155 sentimitir, dhererka dhererkiisu wuxuu u dhexeeyaa 132 sentimitir.
Madaxa xayawaankani waa yar yahay, qallalan yihiin, qiyaas ahaan isku laaban yihiin, waji yar leh, geesaha ilamaha waa yar yihiin. Qoorta jilitaanka Shorthorn muddo dheer maaha, muruqyada ku jira waa mid aad u horumarsan.
Xabadku waa mid ballaadhan oo ku saabsan afartan iyo labaatan mitir, oo qiyaastii toddobaatan mitir ah. Miisaanka naasku wuu weyn yahay oo waa laba boqol santimitir. Farxad faro badan. Laab iyo dhabarka, toosan iyo murqaha. Torso qaab ah foosto ballaaran, oo leh feeraha xajmiga ee la xiriira dhabarka.
Gadaashiisa dhabarka waa mid aad u horumarsan, musqulaha qeybtan ayaa sidoo kale si fiican loo horumariyaa. Musqulaha, tuubooyinka qaliinka, iyo qaybta qaliinka ayaa sidoo kale leh musqul wanaagsan. Laabbooyinka aan dheereyn, toosan u dhig.
Xayawaanku waxay leeyihiin maqaar jilicsan oo daboolan oo ku daboolma timaha.
Isku celcelinta Udder burenok. Celcelis ahaan laba iyo toban bilood, waxay bixiyaan qiyaastii 300 kiiloogaraam oo caano ah. Laba weylood ayaa lagu kicin karaa nuugista, taas oo aad u wanaagsan.
Midabka qorraxdu way ka duwanaan kartaa: qiyaastii boqolkiiba 50 ayaa ku guuleysatay casaan, qiyaastii boqolkiiba saddex cad cad, qiyaastii 27 boqolkiiba casaan iyo kala-soocid, iyo ilaa boqolkiiba 20 xayawaanka royal. Digniin gaar ah laguma siinin midabada dharka, dhammaan dareenka ayaa la siiyay dastuurka iyo wax soo saarka beeraha.
Waa noocee sifooyinka wanaagsan haysto jilitaanka Shorthorn, waxaan hoos ku taxanahay:
Marka hore, taranka waa wax soo saar badan ma aha oo keliya helitaanka hilibka, laakiin sidoo kale caanaha.
Marka labaad, Shorthorns waa ka hor.
Marka saddexaad, hilibka waxaa lagu gartaa dhadhan sare.
Afar ahaan, qorraxdu waxay aad u badan yihiin adduunka.
Fifthly, mass ee la gowraco waa mid aad u sarreeya.
Lixaad, jajab weyn ayaa ah mid lagu daray.
Dhibaatooyin Tani waa calaamadaha soo socda:
Bacrinimo yar ee lo'da.
Xayawaanka Shorthorn waa mid aad u baahsan oo ku nool nool iyo nafaqo.
Sidoo kale, lo'daha noocaan ah waxaa laga qaadaa cuduro kala duwan.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan doorashada ee lo'da.
Waa kuwee sifooyinka Qalabka Shorthorn?
Tilmaamaha qorraxda waxaa ka mid ah qadar sare, Kobaca si degdeg ah oo degdeg ah, awoodda lo'da inay fatahay da'da yar, iyo sidoo kale wax soo saar badan.
Muuqaal ah ee lo'da ee this caan ka yihiin tayada hooyada wanaagsan.
Astaamo muuqaal ah oo ka mid ah arimahan waa geesahooda gaaban.
Beeralayda koraan qoryaha ayaa si fiican u hadlaya, iyagoo sheegaya in xayawaanku ay yihiin kuwo aad u caqli badan.
Markaad ka gudubto nuucyada kale, Shorthorns waxay soo gudbisaa tayadaas sida sahlan dhalmada, dabeecad nabadeed, koritaan degdeg ah, iyo sidoo kale miisaanka caadiga ah ee qaan-gaarnimada. Waqtigan xaadirka ah, lo'da shorthorn ee lo'da ma aha dalab weyn sida hore.
Maalmahan, taranka Shorthorn waa la nadiifiyaa oo nadiif ah loo isticmaalo jarista, taas oo ka dhalatay taas oo ay sugayaan horumarinta hilibka hilibka lo'da.
Waa maxay tusmooyinka wax soosaarista ee jilicsanaanta?
Wixii taranka this, hilibka iyo caanaha labadaba waa kuwo qaas ah wax soo saar aad u sarreeya.
Wadamada sida Maraykanka, England iyo Kanada, noocyada Shorthorn ee noocyada hilibka ayaa ah kan ugu ballaadhan.
Miisaanka hal lo'da waa ilaa 550 kiiloogaraam, qiyaasta hal dibi waa qiyaastii 900 kiilo garaam. Miisaanka qashinka ah ee lo'da fedar waa qiyaastii boqolkiiba 70, qaarna waxay gaari karaan ilaa 82 boqolkiiba.
Waddankeena, taranka Shorthorn sidoo kale waa mid aad loo qiimeeyo wuxuuna siinayaa wax soo saar badan. Cunto duufaan cusub ayaa ku dhowaad soddon kiilogaraam, kabacdi qaangaar ah waa ilaa 600 kiilogaraam, qiyaasta bullaacadaha wax soo saarka waxay gaari kartaa hal tan, xaaladaha gaarka ah xitaa 1,270 kiilogaraam.
Cabbitaanka dufanka da'diisu tahay hal sano iyo badh waa qiyaastii 600 kiilo garaam, miisaan culus waa qiyaastii boqolkiiba 60. Tayada hilibka hilibka ee lo'dadan waa mid aad u sarreeya. Hilibka waa jilicsanaan, oo leh lakabyo isku dhafan oo dufan leh.
Qoryaha lafdhabarta ee hilibka iyo caanaha, ayaa sidoo kale bixiya waxqabad wanaagsan. Celceliska caanaha celceliska mid ka mid ah lo'da sanadkiiba wuxuu qiyaastii 2500 kiiloogaraam oo caano ah, waxyaabaha dufanka leh kuwaas oo wuxuu ka kooban yahay 3.6 - 3.9 boqolkiiba. Waxaa jira dad haysta rooga digida oo ku siin kara ilaa 6000 oo kiiloogaraam oo caano ah sanadkiiba.
Jiilka Shorthorn ee jilicsan ee hilibka ayaa ku dhalaalay aduunka oo idil. Iyada oo ku saleysan ilamaha, qiyaastii 50 noocyo kala duwan oo lo 'ah ayaa la siin jiray. Tusaale ahaan, isla hal England ayaa la abuuray, ee Maraykanka lix nooc, oo ku yaal Ruushka saddex nooc.
Laakiin sannadihii ugu danbeeyay, jiilka Shorthorn ayaa bilaabay inuu lumiyo sumcaddiisa si weyn. Waxaa laga yaabaa in tani ay sabab u tahay xaqiiqda ah in xoolaha this ee xoolaha waxaa la qabtay shaqo yar.
Xayawaanka Shorthorn waa xayawaan aad u fiican. Waxaa la barbardhigi karaa geedkii hore, oo u baahan in la soo noolaado wax yar, abuuro dhammaan xaaladaha lagama maarmaanka u ah horumarka mustaqbalka, ka dibna mar kale ilbaxnimadan ayaa iman doona nolosha.